Vicente Del Bosque Oo Kula Taliyay Tababare Guardiola Inuu Ku Biiro Kooxda Bayern Munich Iskana Ilaabo Ku Biirista Chelsea. 2012-06-23 22:54:17
Vicente Del Bosque oo kula taliyay Tababare Guardiola inuu ku biiro kooxda Bayern Munich iskana ilaabo ku biirista Chelsea.
Rajadii kooxda Chelsea ay ka lahayd inay lasoo wareegto tababarihii hore ee kooxda Barcelona Pep Guardiola ayaa waxa ku timid dharbaaxo xooggan kadib markii Tababaraha xulka Spain Vicente Del Bosque uu kula taliyay tababare Guardiola uu ku biiro Bayern Munich iskana daayo inuu hishiis u saxiixo kooxda Chelsea oo si wayn u raadinaysay macalinkaas.
Tababare Guardiola ayaa waxaa uu qorsheynayay inuu xilliga soo aadan uu ku biiro kooxda Chelsea isla markaasna uu hishiis u saxiixo waxaana si weyn u doon doonayay Milkilaha saliiidda ka taajiray ee Roman Abramobich.
Guddoomiyaha kooxda Bayern Munich Uli Hoeness,agaasimaha guud ee kooxda B.Munich christen Nerlinger ayaa la kulmay wakiilka Guardiola oo lagu magacaabo Jose Maria Orobita waxayna kala hadleen qorshe uu 41 jirka wadan Spain Guardiola uu ugu biiri lahaa kooxda Bayern Munich.
Guariola ayaa haatan deg deg uusan ku jirin wuxuuna rabaa inuu sanad nasiino ah qaato waxaana tababare Vicente Del Bosque oo ah macalinka xulka Spain ayaa kula taliyay inuu Guardiola uu doorto kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich.
Rajadii kooxda Chelsea ay ka lahayd inay lasoo wareegto tababarihii hore ee kooxda Barcelona Pep Guardiola ayaa waxa ku timid dharbaaxo xooggan kadib markii Tababaraha xulka Spain Vicente Del Bosque uu kula taliyay tababare Guardiola uu ku biiro Bayern Munich iskana daayo inuu hishiis u saxiixo kooxda Chelsea oo si wayn u raadinaysay macalinkaas. Tababare Guardiola ayaa waxaa uu qorsheynayay inuu xilliga soo aadan uu ku biiro kooxda Chelsea isla markaasna uu hishiis u saxiixo waxaana si weyn u doon doonayay Milkilaha saliiidda ka taajiray ee Roman Abramovich.